ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): July 2012
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:17 PM No comments:
Labels: Android, Android Application, Phone
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလေ့လာသင့်တဲ့ ပိဋကတ်(၃) ပုံ မြန်မာဘာသာပြန်ထား
တဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလေ့လာနိုင်ဘူး မဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် လေ့လာချင်စိတ်
ရှိတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ပါဠိတော်တွေအားလုံးကို မြန်မာဘာသာပြန်ထားပေး
ပြီးသားပါ။ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:59 PM No comments:
Android Application လေး ခပ်ဆန်းဆန်းလေးတမျိုးပါ။ ဖုန်းဆိုင်တွေမှာတောင် မရှိနိုင်သေး
ပါဘူး။ အမျိုးကောင်းသားဆီမှာတွေ့လို့စမ်းပြီးသုံးကြည့်တာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလို့ သူငယ်ချင်း
တွေကိုလည်း သုံးစေချင်လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်
ပေးလည်းဆိုရင် ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာ ဖုန်းကို နားရွက်နားကပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းကိုင်ပြီး စကားပြောဖို့အဆင်
သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဖုန်းကို နားကနေခွာလိုက်တာနဲ့ Auto Speaker ဖွင့်ပေးပါတယ်။ ဖုန်းလာလို့ Ring မြည်
နေချိန်မှာ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမှောက်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက Silent ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဖုန်းကိုလှုပ်ခါလိုက်တာနဲ့
ဖုန်းချသွားတဲ့ Function တွေပါဝင်ပါတယ်။
Android Version 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှသာအဆင်ပြေ
မှာပါ။ သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:46 PM 1 comment:
Adobe Reader ကို ကျွန်တော် ဟိုးအရင်ကတည်းက တင်ဖို့တော့စိတ်ကူးပါသေးတယ်။ မလိုအပ်
လောက်ဖူးထင်လို့ ကျွန်တော်မတင်တာပါ။ အခု Cbox မှာ MMiTD ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လာတောင်း
ထားလို့ အခြားသောလိုအပ်မယ့်သူငယ်ချင်းများလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗျာ။ Adobe Acrobat or PDF ဖိုင်တွေကို ဒီ Adobe Reader နဲ့ဖတ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ Free Version
လေးဘဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာ Install လုပ်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:47 AM No comments:
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာ ရှိထားသင့် တဲ့ Software တစ်မျိုးပါဘဲ။ Jet Clean ဆိုတဲ့ Cleaner
လေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြပါ့မယ်။ ဒီကောင်လေးက ဘာတွေကို Clean လုပ်ပေးနိုင်လည်းဆိုရင်
Window System Clean , Shortcuts Clean , Application Clean, Registry Clean , RAM Clean စ
သည်တို့ကို Clean လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါအပြင် Window တက်လာရင် အရင်ဦးဆုံး မ run ချင်တဲ့
Software တွေကို ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ Startup Optimization , မလိုချင်တဲ့ Software တွေကို Uninstall
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Uninstaller , Internet Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Internet Booster , Registry တွေ
ကို Manage လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Registry Derangement , စတဲ့ Function တွေပါဝင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Key ပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:57 AM 1 comment:
Desktop ပေါ်မှာ အရမ်းလန်းလန်းလေးတွေဖန်တီးချင်သူများအတွက် အရမ်းမိုက်တဲ့ Software
လေးတစ်ခုရထားလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တ်ေလည်းလက်ရှိသုံးနေပါတယ်။ Real Desktop လေး
ကဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်နိုင်သလည်းဆိုရင် Desktop ကိုလည်း 3Dပုံစံမျိုးဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ Icon
လေးတွေကိုလည်း နေရာချပြီး အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ Wallpaper တွေနဲ့လည်း အလန်းဇယားလေးတွေလုပ်
ယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြားသော Desktop ကို အလှဆင်ပေးနိုင်မယ့် Functionများစွာလည်း ပါဝင်ပါ
ကလိချင်သောသူငယ်ချင်းများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:42 PM No comments:
Cursor အလန်းလေးတွေယူဖို့အတွက် Cursor FX Control Panel
မိမိတို့ရဲ့ Computer မှာ Cursor လှလှလေးတွေ ထည့်ပြီး အသုံးပြုလို့ရအောင် Software
လေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Cursor FX လေးကတော့ မိမိအသုံးပြုချင်တဲ့ Cursor လေးတွေကို
ရွေးပြီး တန်းသုံးရုံပါဘဲ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုရတာ
လည်းလွယ်ကူပါတယ်ဗျာ။ စမ်းပြီးသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:41 PM No comments:
အိုးဝေ: T-TECTO 3.0 (Software) Registration Key လေးလိုချင်လို့ပါ
အကိုလား အမလားလော့မသိဘူးဗျ။ ဟဲဟဲ တောင်းထားတာလေးတွေ့လို့ ရှာရှာဖွေဖွေတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ ရှာတွေ့တော့လည်း သိပ်နားမလည်လို့ နီးစမ်ရာဆရာတွေကိုမေးကြည့်တော့ ဘူမိဗေဒ
ပညာဆရာ Software တစ်မျိုးလို့သိရပါတယ်ဗျာ။ အိုးဝေ ရေ ကျွန်တော်အခုတင်ပေးလိုက်တာက Free Version လေးပါ။ တင်ပေးခဲ့တာနဲ့ မကိုက်ညီရင်လည်း ပြန်ပြောပါဦးဗျ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ
အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်နော်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:32 PM No comments:
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးနေတဲ့သူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software လေးပါဘဲ။ Antilogger
တစ်မျိုးပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်ဆိုင်တွေက တော်တော်များများကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလာပါပြီ။ ဆိုင်အချို့ကတော့ ပုံမှန်ပါဘဲ။ အချို့ဆိုင်တွေကတော့ Keylogger ကိုလက်တည့်စမ်းပြီး သူများ တွေကို ထိခိုက်အောင်လုပ်လာကြလို့ပါ။ ကျွန်တော်မကြုံဖူးပေမယ့် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်
ကြုံဖူးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကောင်းနိုးရာရာ Antilogger လေးတွေကို ရှာဖွေပြီး တင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်
ဗျာ။ ဒါလေးကတော့ Logger တော်တော်များများကို ရှာဖွေပြီး ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြု
နိုင်အောင် Keygen လေးပါတင်ပေးထားပါတယ်။ Zemana Antilogger ကိုလည်း အရှေ့မှာ တစ်ခါတင်ပေး
ဖူးပါတယ်။အခုကတော့ Version အသစ်ထွက်လာလို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။လိုအပ်မယ့်သူငယ်ချင်းများ
အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
ထူးထူးဆန်းဆန်း Post တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး IDM ကို Version အသစ်ထွက်လာလို့တင်
ပေးလိုက်တာပါ။ အရင်တုန်းကတင်ပေးသလိုမျိုးပါဘဲ ။ ဒီတစ်ခါတော့ Patch File နှစ်ခု ပါ ထည့်ပေးလိုက်
ပါတယ်။ တစ်ခုနဲ့မရရင်နောက်တစ်ခုနဲ့ အဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါ။ ရှိပြီးသားသူငယ်ချင်းများ အတွက်
Sorry ပါဗျာ။ မရှိသေးသောသူငယ်ချင်းများ အသုံးနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:50 PM 1 comment:
ကျွန်တော် အရှေ့မှာ Window Admin Password ကို ကျော်ခွနည်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးလောက်
တင်ပေးဖူးပါတယ်။ အဲဒါတွေက CD နဲ့တင်နည်းပါ။ အခုဟာက USB နဲ့တင်နည်းလေးတွေ့လို့ စမ်းကြည့်
တာအရမ်းသဘောကျသွားတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းများကိုမျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ ဒါလေးကိုတော့
ကိုဝင်ကျော်ကျာ် (Winkabarkyaw) ဆီကနေယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာ နည်းလမ်းလေးကို ဆရာကျော်က ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြထားတာပါ။ အောက်မှာ သေချာကြည့်လိုက်နော်။
ဒါလေးကတော့ Window Admin Password ကို USB နဲ့ ကျော်ဝင်ဖို့ပါ...အရင်က တင်ပေးထားတဲ့ Window Admin Password ကို USB နဲ့ ကျော်ဝင်နည်းက အဆင်မပြေဘူး ပြောနေလို့ ဒီနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
အသုံးပြုနည်းကတော့ 2GB (or) 4GB ပမာဏ ရှိတဲ့ USB တစ်ချောင်းကို ကွန်ပြူတာမှာ တပ်ပြီး Format ချပါ.. (USB Format ချနည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်)
အပေါ်က Download Button ကိုနှိပ်.rar ဖိုင်လ် လေးကို ဒေါင်းယူပြီး ဖြည်လိုက်ပါ..။
ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါ ထဲက kno-boot-usb ဆိုတဲ့ Application လေးကို Double Click လိုက်ပါ...
CMD command box ပွင့်လာရင် မိမိ ရဲ့ USB Drive F , G , H တခုခုကို ရေးပြီး....(ဥပမာ မိမိ ရဲ့ USB Drive က F ဆိုရင် CMD command မှာ F ကိုရေးထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ...။ ပြီးရင် Any Key ကီး တခုခု ကိုနှိပ်ပေးပြီး ထွက်လို့ရပါပြီ....:)
အားလုံးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကွန်ပြူတာကို Restart ချ (F2 (or) F12 (or) Del (or) F9 BIOS ထဲဝင်ဖို့ နှိပ်ရမဲ့ Key တွေကတော့ ကွန်ပြူတာ အမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်) တခုခုကနေ BIOS Device Menu ကို ဝင်ပြီး 1st BOOT မှာ 1st Kon-Boot ကို ရွေးပေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
ခဏ နေလို့ Window တတ်လာရင် Enter ခေါက်ပြီး Admin Password ကို ကျော်လို့ရသွားပါပြီ...။
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ.... အဆင်မပြေရင် ဒီမူရင်းဆိုက်ဒ် မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ.....:)
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:12 AM No comments:
အခုတစ်ခါမျှဝေပေးချင်တာကတော့ Super Hide IP ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်လည်း
ဆိုရင် ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ IP Address ကိုပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကသုံးနေပေ
မယ့် Singapore ဖြစ်ဖြစ် US ဖြစ်ဖြစ် မိမိဖော်ပြစေချင်တဲ့ IP ကိုပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်
အောင် Crack ဖိုင်ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ Crack ဖိုင်ကို မဖွင့်ခင် Antivirus ကိုတော့ ပိတ်ထားပေးဖို့
စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်သူများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:31 PM No comments:
ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် PES 2012 Game Highly Compressed (Only 25.6MB)
ဘောလုံးဝါသနာပါသော သူငယ်ချင်းများအတွက် Game လေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ဗျာ။ အမျိုးကောင်းသားဆီကနေယူလာတာပါ။ သူ့ရဲ့ Original File Size က 10.6GB ရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုချုံ့
လိုက်တာ 25.6MB ဘဲကျန်ပါတော့တယ်။ Window7နဲ့ Vista မှာသာ အဆင်ပြေမှာပါ။ Graphic Card ကအနည်းဆုံး 1GB ရှိရပါမယ်။ RAM ကတော့ 2GB နှင့်အထက်ရှိရပါမယ်။ ကျွန်တော်လည်း Installမလုပ်
ရသေးပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်စက်က အဲဒီလောက်မမြင့်တော့စမ်းဖို့အဆင်မပြေသေးလို့ပါ။
ကစားချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်က Link ကနေပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါ
Android နဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်လည်း PC နဲ့သုံးသလိုဘဲ ဒေါင်း
လုပ် Speed ကို ရှယ်ဆွဲပေးနိုင်မယ့် IDM လေးပါ။ Version ကတော့ 1.2 ဖြစ်ပါတယ်။ File Size ကလည်း
117.6KB ဘဲရှိလို့ ဒေါင်းလိုက်တာနဲ့ဖွတ်ရွတ်ဆို ပြီးသွားမှာပါ။ Android Version 1.5 နှင့်အထက်ဖုန်းများ
မှ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနေ့မှ စပြီး စမ်းသုံးတုန်းရှိပါသေးတယ်။ ပုံမှန်ထက်တော့ နည်းနည်းပိုမြန်သလိုဘဲဗျ။ စမ်းနေတုန်းပါ။
သူငယ်ချင်းများလည်း စမ်းပြီးသုံးချင်ရင်တော့ အောက်က Linkမှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:01 AM 1 comment:
Wifi ပြန်လွင့်ပေးနိင်ရန်အတွက် Connectify Pro v3.5.1
မိမိမှာရှိနေတဲ့ အင်တာနက်ကွန်နရှင်ကို အခြား Laptop , Phone , PC တွေကို Wifi နဲ့သုံး
နိုင်အောင် ပြန်လွှင့်ပေးတဲ့ Software လေးပါ။ PC နဲ့ Wifi သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Wireless Card လို
တာပေါ့နော်။ Connectify Pro ကို အရှေ့မှာလည်း တစ်ခါတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခုဟာက Version အသစ်
ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ထွက်လာတာတော့ 1လကျော်သွားပါပြီ ကျွန်တော်အခုမှတင်ဖြစ်တာပါ။
စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်သူများ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:27 PM No comments:
3D Animation ကိုစတင် လေ့လာနေသူများအတွက် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရထားလို့ ပြန်လည်
မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားပြုစုထားသူကတော့ ဆရာ နေဇော်ဝင်းမောင်ဖြစ်ပါ
တယ်။ အထဲမှာ အသုံးပြုပုံ တွေအားလုံးကို ပုံနဲ့တကွသေသေချာချာလေးရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့ Beginner
တွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေပါတယ်ဗျာ။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ပထမတွဲလေးပါ။ ဒုတိယတွဲစာအုပ်ထွက်
လေ့လာချင်သူများအောက်က Link မှာယူထားပါနော်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:42 AM No comments:
Wallpaper လှလှလေးတွေတွေ့ထားလို့ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အထဲမှာတော့
ပုံပေါင်း 100 နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေကတော့ အစုံပါဘဲ Animation ပုံတွေ , 3D ပုံတွေ , မျိုးစုံပါဝင်
ပါတယ်။ Wallpaper ကိုစုဆောင်းတက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရှယ်ပါဗျာ။ File Size ကလည်း ပြန်ချုံ့
ထားတာ 6.8MB ဘဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ ဒေါင်းယူသူအဖို့ အဆင်ပြေမှာပါ။
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူကြပါနော်။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:17 PM No comments:
Mail ထဲမှာလား Cbox မှာလား တောင်မမှတ်မိတော့ပါဘူးဗျာ။ အကိုတစ်ယောက်တောင်း
ထားလို့ အခုမှတင်ပေးဖြစ်တာပါ။ နှောင့်နေးသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်အခုတလော
နည်းနည်းလေးအလုပ်များနေလို့ပါ။ ဒါလေးကတော့ Driver Scanner လေးပါ။ Internet Connection ရှိ
မယ်ဆိုရင်မိမိကွန်ပြူတာမှာရှိနေတဲ့ Driver တွေကို Upgrade လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့Driver တွေ
ကိုလည်း Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version ဘဲတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
ကျွန်တော် Blog အကြောင်းမတင်ဖြစ်တာကြာလို့ တစ်ခုလောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါလေးကလည်း ချစ်ကိုကြီး ကိုအေးလွင်ဆီကနေ ဓါးပြတိုက်ပြီးယူလာတဲ့ Post လေးပါ။ အောက်မှာကြည့်
1. blogger မှာ log in ပြီးရင် Design >> Edit HTML သွားပါ။
2. "Expand Widget Templates" ရှေ့က box လေးမှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးလိုက်ပါ။
3. အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကိုရှာပါ။ Templates တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတော့ ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်
4. အနီရောင် ကုဒ်နှင့် အပြာရောင်ကုဒ် ကြားမှာ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ကုဒ်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ
<img src="ပုံရဲ့ URL- link ထည့်ရန်" style="border-width: 0px;" />
ဥပမာ ဒီလိုလေး ဖြစ်သွားပါ လိမ်မယ်
<a expr:href='data:post.url'> <img src="ပုံရဲ့ URL- link ထည့်ရန်" style="border-width: 0px;" /><data:post.title/></a>
5. template ကို save လို့ ရပါပြီ။လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးစီး ပါပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:16 AM No comments:
Labels: Blogspot နည်းပညာ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:02 AM3comments:
Job Vacancy 29 .7. 2012 5:00PM နောက်ဆုံးထားလျှောက်ရန်
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမှာ နည်းပညာများတင်မကဘဲ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပါ
အခါအခွင့်သင့်သလိုမျိုး တင်ပေးသွားပါ့မယ့်။ အခုတင်ပေးထားတဲ့ Job Vacancy ကလည်း NGO Project တစ်ခုပါ။ အောက်မှာ ဖတ်ပြီး မိမိနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှသူ
ငယ်ချင်းများအားလုံး အလုပ်လက်မဲ့ ကင်းရှင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ။
Water, Research and Training Centre (WRTC – Myanmar) isapublic interest research, training and advocacy organization expressing the best interest of the Myanmar peoples.
WRTC is founded in June 1997, registered under the Netherlands’ Law on 8 September, 1997. It also isamember of the Dutch Chamber of Commerce (KvK No 41160487). The WRTC is 250 members strong and the nineteen person board of governors advises and directs the WRTC’s research, training, consultancy, policy, advocacy, networking and information dissemination services.
We are now seekingacandidate to fill for the following position:
Position Title: Project Assistant/Research Assistant 1 person (Male or Female)
Duration: One Year (with one month probation), renewable upon performance satisfaction
Reporting line: The incumbent reports to the supervisor
Honorarium: 50,000 Kyats (All WRTC staff members are volunteers to the development of Myanmar. Thereforeareasonable lump sum amount is honored for their good deed.)
· Conduct the basic project works
· Doing paper work, typing, photocopying, scanning, drafting and printing of the WRTC correspondence
Internet research with given keywords (training will be provided)
Creating documents, power point presentation files, pamphlet, participant lists
Purchasing office supplies, equipments and stationary
Paying bills for electricity, telephone and water, etc.
Emailing, computer related assistance and attending relevant meetings
At times it is necessary to travel to project sites (not so frequently)
Any other pertinent tasks assigned by the supervisor
Good computer skill for Microsoft office (Word, Excel and Power Point Presentation)
Good communication skill, ready to listen to others and be spontaneous
EssentiallyaTeam player, ability to take initiatives, excellent interpersonal skills
Well-organised office worker
Tolerance for hard work and long hours
Interested persons should send an application letter (cover letter) along with
1) CV with two recent photos
2) Scanned copies of the certificates and related documents, no later than 5:00 pm, 29th June 2012 to the following address.
No.74, Yadana Myintzu Street, Sa/Ka Quarter, Thingangyun Township, Yangon
Email addresses: wrtcmyan@gmail.com and aiweb.lead@gmail.com
Please note that only short listed candidates will be contacted for interview. The interview will be held on 1st July 2012 at the WRTC office.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:45 PM No comments:
Digital ပစ္စည်းလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြသာနာများဖြေရှင်းခြင်း (Ebook)
စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထပ်တွေ့ထားလို့ ကျွန်တော်ပြန်ပြီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီစာအုပ်
လေးကတော့ အခုခေတ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့စာအုပ်လေးပါဘဲ။ MP3 , MP4 , Ipod , Phone , USB Memory Sitck နဲက အခြားသော Digital ပစ္စည်းများရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ၄င်းပစ္စည်းများမှာဖြစ်ပေါ်
တက်တဲ့ ပြသာနာတွေကိုဖြေရှင်းပုံ နည်းလမ်းများ ၊ အသုံးပြုနည်းများ ကို ပုံနှင့်တကွသေချာစွာရှင်းပြပေး
ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်လို့ ဒေါင်းယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးသောသူငယ်ချင်းများအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:01 PM No comments:
Android Phone အသုံးပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Browser လေးတစ်ခုမျှဝေပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုလက်ရှိ PC မှာလည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ Chrome v 18.0 ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး
ထွက်Version လေးပါဘဲ။ Android Version v2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာသာ အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Browser ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဘာမှရှင်းပြစရာလည်းမလိုလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ သုံးနေကြပုံမှန်အ
အသုံးပြုချင်သူများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။